USA, 11 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
12 qof ayaa lagu soo eedeeyey gobolka Ohio ee dalka Maraykanka inay qasab kaga xiireen gadhkii iyo timihiiba niman qabiilka Amishka ah.
Qabiilka Amishka ayaa la baxa gadhka iyo iyo timaha isla markaana iska mamnuucay inay isticmaalaan waxyaabaha casriga ah, waxayna leeyihiin iskuulo u gaara. Haweenka Amishkuna waxayba xidhtaan masaro iyo toobab dhaadheer.
12 qof ee la soo eedeeyey ayaa isugu jira 10 nin iyo laba haween ah oo afar ka mid ahi isku qoys yihiin. Eedeysanayaasha ayaa bilihii Oktoobar iyo Novembar waxay wadada u galeen isla markaana qasab kaga xiirayeen timaha iyo gadhkaba qofkastoo Amish ah oo wadadaa soo mara iyagoo isticmaalaya maqasyo iyo qalabka baytariga ku shaqeeya ee timaha lagu xiiro.
Eedeysanayaasha ayaa hadii denbiga lagu helo la xiri doonaa ilaa labaatan sano. Arintan oo la mid ah diin nacayb maadaama Amishka aaminsan yihiin in timaha lala baxo qofkii xiiraana uu xadkiiba ka baxay. Dadka Amishka oo ku nool miyiga Maraykanka waxaa beryahan danbe soo gaadhayey dhibaatooyin ay u gaysanayeen dad aan jecleyn diinta iyo dhaqanka Amishka.